Iche iche nke kabeeji | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Iche iche nke kabeeji
Ọ bụ mmadụ niile maara kabeeji Beijing ka ọ bụrụ na ọ bụ salads, ngwa ngwa na ọbụna isi nri. O wee si n'Ebe Ọwụwa Anyanwụ na-abịakwute anyị, na-ebute nri na nri anyị. Ndị nne na nna na-ahụ ụdị kabeeji dị iche iche maka eziokwu ahụ bụ na a pụrụ iji ya dị ka salad, na dịka ụkọ nkịtị. Ị ma? Beijing ma ọ bụ Chinese kabeeji bụ nke obere ego nke turnips nke kabeeji ezinụlọ.
Vitamin bombu, ma ọ bụ uru nke kohlrabi
Na Europe, a hụrụ Kohlrabi n'anya ma kwanyere ya ùgwù - ọ bụ ihe na-enweghị nchebe na nlekọta ya ma gbanwee ọnọdụ ọnọdụ ihu igwe ọ bụla. Ọdịdị dị mma na-ebuwanye ibu na-acha ọcha ọcha, na njirimara bara uru adịghị mma na broccoli. Kedu ihe ọzọ bụ kohlrabi dị ịrịba ama, uru ndị dị aṅaa ka ọ ga - enye ma ọ gaghị emerụ ya ahụ?
Cabbage Kale: klaasị nke iche
Ndị na-eri nri na-eto eto na akwukwo nri a na-akpọ Kale kabeeji, ihe dị iche iche na-ewu ewu na mba ọzọ ma na-akpọkarị "anụ ọhịa" ma ọ bụ "ntụgharị", "braungol" ma ọ bụ "grunkol". Akwụkwọ osisi Brassica oleracea var. Sabellica bụ nke osisi kabeeji ezinụlọ. E jiri ya tụnyere Brussels na-epulite na broccoli, ọ bụghị mgbe a na-emepụta ihe ndị a na-eri nri n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ma n'afọ ọ bụla, ịzụlite na-enwetawanye ọtụtụ ndị na-ebi ndụ n'oge okpomọkụ, karịsịa n'ihi ntu oyi (ruo -15 Celsius C) na uru bara uru nke osisi ahụ.
White kabeeji: ihe kachasị mma maka ịmalite na nkọwa na foto
White kabeeji bụ osisi biennial nwere ọtụtụ nri, vitamin na ihe ndị na-emepụta ihe. Otu ụdị ọcha dị iche iche dị iche na nke ọzọ n'oge oge na-eto eto, nha nke akwukwo nri, juiciness, density. Mgbe ị na-ahọrọ mkpụrụ, ọ dị mkpa iburu n'uche ọnọdụ ihu igwe na mpaghara gị, mpaghara geographic, ihe ngosi okpomọkụ, ụdị na agrotechnical cultivation nke ala.
Ụdị uhie uhie maka okpokoro gị
Uhie uhie na-abaghị uru na-acha ọcha kabeeji. N'agbanyeghị uru ya (ọdịnaya vitamin na mineral dị n'ime ya dị elu karịa na-acha ọcha), otu ilu na-atọ ụtọ njedebe ya. Otú ọ dị, ugbu a n'ahịa, e nwere ọtụtụ ụdị uhie uhie, na-enweghị ihe ndabara a.
Esi họrọ osisi kabeeji: 12 ndụmọdụ kacha mma
Mgbe ị na-agha mkpụrụ osisi kabeeji na-eto eto, anyị na-atụ anya na owuwe ihe ubi n'ọdịnihu ga-aba ụba na nke dị elu, mana nke ọzọ nwere ike ime. Nsogbu a adịghị adị na mkpụrụ nke mkpụrụ ahụ, ma na ndị na-abụghị ndị na-agbaso ihe nchịkọta nhọrọ dị mkpa dabere na ọnọdụ na-eto eto na àgwà nke iche iche. Ya mere, taa, anyị ga-eleba anya otu esi ahọpụta osisi kabeeji iji nweta ihe a chọrọ.
Ihe kachasị mkpa gbasara ịkọ eto "Rinda"
White kabeeji "Rinda F1" - nnọọ ewu ewu taa iche iche. Nlekọta anya, mgbanwe maka ọnọdụ dị iche iche nke ọnọdụ ihu igwe, igbochi ọrịa na pests, mkpụrụ dị ukwuu nke ngwaahịa kachasị tastiest na-eme ka ihe oriri na-amịpụta ihe dị mma ọ bụghị nanị na atụmatụ ụlọ, kamakwa maka ebumnuche azụmahịa.